EMUI 9.1 dia manomboka manomboka amin'ny Huawei P20 sy P20 Pro | Androidsis
EMUI 9.1 dia manomboka amin'ny Huawei P20 sy P20 Pro
Andro vitsy lasa izay ny vaovao rehetra fa EMUI 9.1 dia handao antsika dia nambara avokoa, araka ny efa nolazainay taminao. Vaovao iray tonga taorian'ny nanamafisana azy izay telefaona Huawei izay hahazo an'ity kinova vaovao ity ny sosona personalization. Fanavaozana izay efa manomboka natomboka ho an'ireo telefaona voalohany, dia ny Huawei P20 sy ny P20 Pro.
EMUI 9.1 dia ofisialy, nanomboka natomboka tany Sina andro vitsy lasa izay. Ny Huawei P20 sy P20 Pro no telefaona voalohany nahazo ity fanavaozana ity tamin'ny fomba ofisialy. Efa ampitaina manerantany izy io, toy ny efa nitaterana tamin'ny haino aman-jery samihafa. Vaovao tsara ho an'ny mpampiasa.
Sina no firenena voalohany nanombohan'ny EMUI 9.1 naparitaka, na dia efa mahatratra firenena hafa aza izy ireo. Ka asa fotoana kely vao alefa amin'ny telefaona Huawei any Espana, ohatra. Na dia tsy nanome daty antsika aza ity orinasa ity.
Fanavaozana lehibe, noho ny fotoan-tsarotra lalovan'ny orinasa ankehitriny. Satria tsy fantatra raha ho afaka hanohy hampiasa Android amin'ny findainy izy ireo. Fa farafaharatsiny mba hahafahanao mankafy an'ity fanavaozana ity, izay hivoaka amin'ity volana jolay ity ho an'ny telefaona bebe kokoa.
Raha manana Huawei P20 na P20 Pro ianao dia hahazo EMUI 9.1 tsy ho ela. Izy io dia aparitaka amin'ny alàlan'ny OTA, toy ny mahazatra amin'ireto tranga ireto. Ka tsy mila manao na inona na inona ianao hanaovana azy, miandry fotsiny ny fandefasana azy amin'ny telefaona. Tsy tokony ho ela vao ho ofisialy.
Fanavaozana feno vaovao, izay mampanantena fampisehoana tsaratsara kokoa ho an'ny telefaona, misaotra azy ireo. Ka raha hanavao ny EMUI 9.1 ny telefaoninao dia afaka mankafy azy rehetra ianao. Antenaina fa amin'ity volana ity dia halefa amin'ny telefaona maro hafa amin'ny marika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » EMUI 9.1 dia manomboka amin'ny Huawei P20 sy P20 Pro
Angell dia hoy izy:
Efa nahazo ny fanavaozana ny P20 vadiko aho eto amin'ny colomba. Mahafinaritra fa haingana be ny telefaona.
Valiny tamin'i Angell
Salama, te hahafantatra aho raha afaka manohana ny fanavaozana vaovao ny rafitra fiasa Android ny findaiko Huawei Mate 10 Lite, satria nividy finday aho tamin'ny Oktobra 2018, ary tsy fantatro izay hitranga, satria ao anaty lisitra hanavao tsy miseho ahy io, lazao amiko raha afaka manavao ny emui 9.1 izy io
Azo inoana fa hahazo azy ianao, saingy tsy maintsy miandry ela kokoa noho ny maodely farany izy. Azo antoka fa ao anatin'ny roa volana dia ho fantatra bebe kokoa.
Telefaona 5G inona no azontsika vidiana anio?
Dead by Deadlight beta dia azo alaina amin'ny Android izao